Avelao hisokatra indray ny seranam-piaramanidina Atatürk amin'ny sidina an-trano | RayHaber | raillynews
HomeTORKIAFaritra Marmara34 IstanbulAvelao ny Reopen Atatürk hamoha ny sidina an-trano
Avelao ny Reopen Atatürk hamoha ny sidina an-trano
11 / 02 / 2020 34 Istanbul, ANKAPOBENY, Airports, Highway, Headline, Faritra Marmara, TORKIA
Ny seranam-piaramanidina Ataturk misokatra amin'ny sidina an-trano indray
Tao amin'ny seranam-piaramanidina telo ao Istanbul dia nanombatombana ny fiarovana ny sidina ny manam-pahaizana: "Sabiha Gökçen no lalana faharoa."
Niteraka ahiahy momba ny fiarovana ny sidina ny loza nitranga tamin'ny 5 Febroary tao amin'ny seranam-piaramanidina Sabiha Gökçen. Ny sary izay ny fiaramanidina Boeing 737 an'i Pegasus, izay nahatonga ny dia an'habakabaka Izmir-Istanbul, dia tsy nahajanona teo amin'ny arabe ary nianjera tamin'ny tany masiaka, nahatonga fandikana maro sy hevitra maro. DW Tiorka nanontany ireo manam-pahaizana momba ny fiarovana ny seranam-piaramanidina telo ao Istanbul.
Ny sasany amin'ireo manampahaizana izay nizara ny heviny tamin'ny DW Tiorka dia niantso ary tsy nangataka ny hanoratra ny anarany. Satria, nandritra io vanim-potoana io, ny mpampandeha ny sidina fiaramanidina mpiady taloha Bahadır Altan any Pegasus dia tapitra. Niditra tamin'ny fandaharam-potoana tamin'ny fandaharana tamin'ny fahitalavitra izay nalainy tamin'ny telefaona i Altan ary nirona rehefa avy nifindra toerana satria nilaza izy fa "Toy ny kamio firenena". Altan dia nizara ireto fehezanteny manaraka ireto tao amin'ny twitter: “Izay nolazaiko nandritra ny taona maro dia tsy nahatratra olona maro be. Raha toa ka manakana loza iray ity fahatsiarovan-tena ity ary mamonjy ain'olona, ​​dia handoa imbetsaka ny karazan-javatra isan-karazany aho. ”
Fa maninona no tsy misy ny dingana faharoa?
Ny minisitry ny fitaterana Cahit Turhan dia nilaza roa andro talohan'ny loza: “Misy lalamby ao Sabiha Gökçen. Reraka ity lalana ity. Ny làlambe dia manompo saika isaky ny alina mandritra ny ora tsy misy sidina. ” Ireo teny ireo dia nampiakatra ny fanontaniana hoe nahoana no tsy mbola vita ny lalam-by faharoa. Sözcü Raha ny tati-baovaon'ny gazety momba io olana io, ny mpiara-miasa amin'ny AKA Construction dia nametraka enim-bolana taorian'ny volavola, ary ny orinasa miasa ao amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul dia mitovy: Fananganana Kalyon ary Cengiz Holding. Ilay fanarenana, izay tapa-kevitra hotanterahina ao anatin'ny 14 volana, tsy vita ao anatin'ny 43 volana, vita ny seranam-piaramanidina Istanbul ao anatin'ny 42 volana.
Dia i Sabiha Gökçen irery ihany ve no fihodinana farany? Ny mpanamory mpitari-tafika za-draharaha iray izay nifindra tamina orinasa tsy miankina rehefa niasa tao amin'ny THY nandritra ny taona maro ary manolotra fiofanana amin'ny sidina, dia manoratra ny tsy fahampian'ny seranam-piaramanidina toy izao:
"Reraka amin'ny fampiasana ny gorodona; làlana miolakolaka izay tsy dia tsara loatra hanakanana ny kodiarana tsy hifandray aminy. Fahavoazana goavana amin'ny resaka fitsangatsanganana lavitra izany. Ny mpanamory io no fanamby voalohany indrindra amin'ny fitrandrahana ambany. ”Ny mpanamory ny kapiteny, izay milaza fa tsy ampy ireo fitaovana mandrefitra ny rivotra, dia manondro ny fanontaniana hoe raha misy lesoka ireo dia manisy loza na tsia," Misy ireo fitaovana manome ny fenitra tsotra sy fenitra ambany indrindra ":
“Ny tilikambo dia tokony ho voafantina avy amin'ireo nahazo fahalalana tsy manara-penitra ary manana fahalalana. Na ny vavahady fitaterana valizy aza dia tsy maintsy za-draharaha. Ilaina amin'ny lafiny rehetra ny avotra. Tsy vita mihitsy amin'ny vavaka, torpedo, fanomezana. ”
Airports in Torkia, ny seranam-piaramanidina panjakana Administration (Sama), miankina amin'ny fanompoana. Sabiha Gökçen, etsy andaniny, mankany HEAŞ eo ambany Ministeran'ny Fiarovam-pirenena, satria nokasaina ho kompania ara-indostrian'ny miaramila. (Aviation Industries Inc.) Ireo tompon'andraikitra HEAŞ, izay te hahazo fanazavana momba ny fiarovana amin'ny sidina amin'ny seranam-piaramanidina no nametraka ny fangatahanay amin'ny fanadihadiana tsy voavaly.
"Tsy misy loza raha misy fahazoan-dàlana amin'ny sidina"
Abdullah Nergiz, manampahaizana momba ny sidina ary mpamoaka ny tranokala 101 an'ny zotram-piaramanidina XNUMX, dia tsy nanaiky: "Tsy afaka milaza izahay fa mampidi-doza raha tsy misy fampahalalana ny fahazoan-dàlana."
Nanampy izy fa tsy misy olona hampidi-doza azy, satria ny fihodinam-bitsy kely indrindra dia hisy voka-dratsy lehibe: “Saingy misy ihany koa ny fanarahana akaiky ny lalana. Ka mila fikojakojana izany. Na izany na tsy izany, rehefa nosokafana ny làlambe faharoa dia hidina sy nidina aloha ny voalohany. Raha tamin'ny fandehanany ny fandaharam-potoana dia voalaza fa hifarana amin'ny 2012 izany, dia efa tamin'ny taona 2017 izany… Mbola tsy vita izany. ”
Satria tsy tiana ny seranam-piaramanidina vaovao, tsy manaja ny hevitra i Nergiz fa misy ny fivondronana ao Sabiha Gökçen ary noho izany dia mety ho simba ny lalantsara. Nilaza izy fa tsy afaka mihoatra ny fetra napetraky ny manampahefana eran'izao tontolo izao ny sidina sivily, hoy izy: «Hetsika 40 isan'ora izao. Sabiha Gökçen tsy mandalo an'io mihitsy. ”
"Ny fikarakarana dia tsy midika hoe tsy azo antoka"
Ny filoham-pirenena Hava-Sen Seçkin Koçak dia nilaza fa tsy misy atahorana raha mikasika ny fiarovana ny sidina. Nilaza i Koçak fa io lalana io dia ampiasaina amin'ny fomba mahery vaika, hoy i Koçak hoe: “Manao ny fifehezanao ianao ary manokatra ny lalana indray. Misy olona misoratra anarana volamena isaky ny fifanakalozana rehetra. Ny làlana faharoa dia tsy maintsy vitaina haingana araka izay azo atao fa tsy midika akory hoe tsy azo antoka ny fikarakarana azy. ”
Sedat Cangül, Sekretera jeneralin'ny Hava-İş Union, nilaza hoe: «Tsy izahay no manome fiarovana amin'ny sidina. Miasa amin'ny zon'ny mpikambana izahay. ”
Seranam-piaramanidina vaovao: diso ve ny làlan-kizorana
Ny seranam-piaramanidina faha-2019, izay nanjary lohahevitra be dia be hatramin'ny niorenan'ny tetikasa ary nanomboka ny asa tamin'ny volana Mey 3, dia voatsikera tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny seranam-piaramanidina Istanbul, momba ny fiarovana ny sidina. Ny foibe dia eo afovoan'ny kiana sy fampitandremana. Ireo manam-pahaizana, izay milaza fa ny làlambe dia miorina amin'ny lalana diso, dia mampahatsiahy fa ny fiaramanidina maro no tsy maintsy namakivaky ny làlambe mankany Çorlu na Bursa na dia tsy nisy ririnina henjana aza.
Ny mpanamory ny kapiteny iray manombana ny fiarovana ny sidina noho ny zavatra niainany nandritra ny 3 taona mahery dia nilaza fa ny seranam-piaramanidina vaovao, izay antsoina hoe "loza manoloana ny toerany", dia nahazo rivotra ivelan'ny lalantsara izay misokatra amin'ny rivotra avaratra sy malefaka ao amin'ny Ranomasina Mainty, ary ny làlan'ny mpitsara dia tsy marina. Noho izany antony izany dia nambarany fa misy fikosoham-borona maro manodidina azy ary niteny hoe: "Ny toerana voafantina dia ratsy. Mangatsiaka be foana isaky ny 5 degre raha oharina amin'i Istanbul; toerana izay misy be ranomandry sy zavona. Fa ambonin'izany, ny tanin'ny tahan'ny dia harena ankibon'ny tany. Ny firafitry ny tany dia mety amin'ny fitrandrahana rano sy ny fianjerana. "Efa nanomboka ny lozam-pifamoivoizana any amin'ireo toeram-piantsonana," hoy izy.
Raha hazavaina fa tian'izy ireo hotandreman'ny seranam-piaramanidina Atatürk farafahakeliny indray ny fahavaratra sy ririnina iray amin'ny kianja vaovao, hoy ny mpanamory ny kapiteny: “Fa maninona isika no mifarana? Ho kianja iray izay misy lalana 3 izany, izay azontsika ampiasaina raha ilaina izany. Niresaka be izahay fa tsy afaka nihaino izahay. ”
"Misy seranam-piaramanidina aorina na aiza na aiza, raha mbola atao tsara"
Ilay manam-pahaizana momba ny fiaramanidina Abdullah Nergiz dia tsy dia manahy momba ny fisafidianana ny toerana. Manome ohatra avy any Osaka, Hong Kong, Korea Atsimo ary mampahatsiahy fa misy seranam-piaramanidina aorina ambonin'ny ranomasina, dimy kilometatra miala ny morontsiraka, “Tsy misy toerana ratsy. Ny teknolojia fananganana dia lasa toy izany fa afaka manao izany ianao amin'ny toerana rehetra. Ny vidiny ihany no miakatra. ” Araka ny voalazan'i Nergiz, izay tsy manaiky ny tsikera momba ny rivotra, dia tsara ny manana rivotra eo amin'ny filanjana ary miala. Ny toe-javatra tokana dia ny mamaritra ny rivotra manjaka sy manamboatra ny làlan-kizorana. "Tsy afaka hiteny tsy mety izahay fa ny làlan'ny làlana dia tsy tsara," hoy izy.
“Tsy manana varavarana eo am-baravarana izahay”
Ny filohan'i Hava-Sen Seçkin Koçak, amin'ny fanekena fa misy zavatra tsy misy na tsy ampy, dia omena fanampiana ireo:
“Misy vintana ve ny hikapoka ny lakilen'ny fampiasam-bola be dia be? Maniry aho fa tsy vita tao, faniriako raha mety ho firenena hendry kokoa isika, saingy tsy izany. Sabiha Gökçen dia kianja tokony hahalehibe, ary ilaina ny manandrana mameno ny fahafahan'ny Airport Istanbul tsy mila setroka be loatra. Ilaina ny fepetra mba hamenoana ireo lesoka. Tsy milefitra ny fanemorana. Ny iray minitra fitrandrahana fanampiny dia midika tapitrisa dolara isan-taona. ”
Araka ny filazan'i Koçak, izay nilaza fa "Tokony hiasa faratampony ireo seranam-piaramanidina roa ireo" dia mila seranam-piaramanidina hafa indray i Istanbul folo taona aty aoriana.
"Izy io dia ny hanapaka ny atody volamena menaka"
Koçak, Nergiz ary mpanamory mpiasan'ny kapiteny rehetra izay mizara ny heviny dia manolo-kevitra fa hisokatra indray ny seranam-piaramanidina Ataturk ho an'ny sidina an-trano. Nilaza fa afaka hanomboka sidina an-trano indray any amin'ny faritra efa nampiasaina ho an'ny fiaramanidina, protocols ary fiaramanidina manokana, mampahatsiahy ny manampahaizana fa misy seranam-piaramanidina ao afovoan-tanàna amin'ny metropolisy toa an'i London, New York ary Paris.
"Ringana tanteraka volamena gisa," hoy Narcissus, hoy izy fa tsy ara-toekarena Torkia dia ho afaka hanao toy izany bonkörlük. Ny ampahany sasany amin'ny terminal iraisampirenena dia mampatsiahy fa tamin'ny taona 2015 sy 2017 ity, nilaza hoe: "Misy ny terminal an-trano, misy ny habetsahan'ny sidina an-trano, samy miala sasatra ny mpandeha, tsy mandany andro ary miala sasatra ny seranam-piaramanidina roa".
Ireo manam-pahaizana nilaza fa ny seranam-piaramanidina telo dia azo ampiasaina ara-teknika rehefa misy ny fifehezana ny habakabaka ahafahana mitondra fifamoivoizana am-pahatoniana, "Toa fitsapana izany. Vahaolana amin'ny alàlan'ny fifanarahana eo amin'i DHMI sy IGA. ”(Deutsche Welle Turkish)
Ny tetikasa Çorum Railway Accelerated, ny seranam-piaramanidina dia efa vonona izao
Fitaterana ny fitaterana an'habakabaka any Istanbul New Airport
3 Direct Flights to Izmir. Fifanarahana amin'ny serivisy misedra
Voaro ny fitsapana! Toeram-pisakafoanana voalohany any amin'ny seranana New Istanbul
Momba ny seranam-piaramanidina Xirta Siirt ho an'ny Flight
Istanbul Metropolitan munisipaly Yenikapi Ataturk Airport Light Metro Line Tender dia nosokafana
İmamoğlu: Tokony hifanakalozana hevitra indray ny famaranana ny seranam-piaramanidina Atatürk
Fanamarihana Tender: Ho azo ny fanaraha-maso sy ny serivisy fanaraha-maso (Haydarpaşa-Ankara…
3 avy amin'ny seranan'i Atatürk DHMİ. Kitapoingon-tsindrimandry ho an'ny seranana
Rehefa misokatra ny seranam-piaramanidina fahatelo dia hikatona ny seranam-piaramanidina ao Atatürk
Ataturk Airport, World Best 3. Airport Selected
Miaro ny governemanta ny governemanta YHT Abonman amin'ny teny hoe 'voavaha ny tsy rariny'